जनकपुर : एक युवतिको शंकास्पद मृत्यू, एकैपटक ६० ओटा टयाबलेट खाइन् ?
तर, विहान आउँदा पति र उसका घरका सबै जना फरार थिए । -परिवारजन
प्रकाशित मिति : २५ जेठ, २०७६ , १३:३५:०० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषामा एक युवतिको शंकास्पद मृत्यू भएको छ । परिवारजनले ती युवतिको हत्या गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ६ सखुवा महेन्द्रनगर बस्ने विन्दे यादवका छोरा अरविन्द यादवकी २४ बर्षिय श्रीमति रेणु देवी यादवलाई अत्यधिक औषधीको डोज दिएर हत्त्या गरिएको पीडित परिवारजनले आरोप लगाएको छ । गएराती आफ्नो पत्नीलाई उपचारको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल ल्याएको तर उपचारको क्रममा पत्नीको मृत्यु भएपछि लासलाई अस्पतालमा छोडेर फरार भएको माइती पक्षको आरोप छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले औषधिको अत्यधिक प्रयोगले मृत्यु भएको हुन सक्ने बुझिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार, प्रारम्भिक जानकारीले रेणुलाई अत्यधिक औषधीको डोज लिइएको वा दिइएको हुन सक्छ । रेणु ६० ओटा भन्दा बढ़ी टेबलेट खाएको वा खुवाइएको देखिएको छ । तर मृत्यूको असली कारण भने पोष्टमार्टमको रिपोर्टपछि मात्रै आउने उनले बताए ।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने राम विनय यादवकी २४ बर्षिय छोरीलाई ससुरा पक्षले मिलेर हत्या गरेको आरोप लगाईएको छ । मृतक रेणुका बुवा राम विनयका अनुसार, रेणुको मृत्यु होइन् हत्या भएको हुन सक्ने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । यादवले भने, -‘छोरीको बारे राति ३ः३५ मा आफुलाई फोन आयो । तर, विहान आउँदा पति र उसका घरका सबै जना फरार थिए ।’
गहभरी आँशु झार्दै यादबले भने, ‘२२ वर्षे छोरी रेणु यादवको ६ वर्ष अगाडी विहे भएको थियो । विहे भएको ६ महिनापछि ज्वाइ विदेश गएको र छोरीलाई फोन गर्न केहि दिनदेखी छोडेको थियो ।’
‘विदेश गएपछि श्रीमानले फोन गर्न बन्द गरेपछि समाजले कुरा मिलाएको थियो । घटनापछि किन पति र घरका व्यक्ति भाग्यो ? प्रश्न गर्दै मृतक महिलाकी बुबाले भने, ‘छोरीको घाटीमा पराल देखिएको छ ।’ छोरीको घाटीमा पराल राखेर थिचेर मारेको मृतक रेणुकी पिताको आरोप छ ।
मृतकको शव अहिले जनकपुर अञ्चल अस्पताल शव गृहमा पोस्टमार्टमको लागि राखिएको छ । पोष्टमार्टम भएपछि मात्र केहि भन्न सकिने जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रशासनको प्रतिक्रिया छ ।
रेणुकी माइत पक्षका अनुसार, मृतक रेणुका पति झण्डै २० दिन पहिले विदेशबाट गाउँ फर्केका थिए । घटनाबारे धनुषा प्रहरीसँग बुझदा धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले भने- 'माइती पक्षले भने जस्तो हत्या नै भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन ।' हत्या गरिएको कुनै सिन्टोम ( सँकेत) नदेखिएकोले आफैं ६० ओटा टयाबलेट खाएर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने उनको कथन छ ।
मृतक रेणुकी पिता राम विनय यादवले रेणुको घाँटीमा पराल भेटेको आरोप्रति प्रवक्ता कार्कीले उनले आत्महत्या गर्न आफैं त्यतिको औषधी सेवन गरेको हुन सक्ने तथा औषधी सेवनपछि छटपटाउँदाखेरी कतै पराल लागेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, - 'पोष्टमार्टम अब हुनेछ, त्यसपछि पेटबाट ६० ओटा टयाबलेटको कुनै सबुत भेटाएपपछि थप रहस्य बाहिर आउने छ ।'
यस घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ ।